विद्यार्थी जीवनकाल देखी राजनीतिमा लागि हालसम्म पनि सक्रिय रहि जनताको सेवाका निम्ती आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै मन्थली नगरपालिका वडा नं.३ को वडाध्यक्ष संग गरिएको कुराकानी - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
विद्यार्थी जीवनकाल देखी राजनीतिमा लागि हालसम्म पनि सक्रिय रहि जनताको सेवाका निम्ती आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै मन्थली नगरपालिका वडा नं.३ को वडाध्यक्ष संग गरिएको कुराकानी
विद्यार्थी जीवनकाल देखी राजनीतिमा लागि हालसम्म पनि सक्रिय रहि जनताको सेवाका निम्ती आफ्नो जीवन समर्पण गेरका रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं.३ को वडाध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति समेत रहेका केशव कुमार रोका सँग बर्तमान राजनैतिक स्थिती , उहाँको वडाको बस्तु स्थिती र उहाँको भूमिका बारे गरिएको छोटो कुराकानी ।
यहाँ राजनीतमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो जन्मनै एक राजनीतिक पृष्ठभूमी भएको परिवारमा भएको थियो मेरो हजुरवुवा प्रधान पञ्च हुनुभएको थियो त्यसैले मेरो बाल्यअवस्था देखिनै मैले राजनीतिलाई चाहेर होस या नचाहेर प्रत्यक्ष नियाली रहनु परयो । पछि जसो जसो म हुर्किदै गए तसो तसो म पनि राजनीति प्रति आकर्षित हुन थाले । र जव म आफ्नो एस एल सि सकेर २०४२ त्रिचन्द्र कलेजम अध्ययनरत थिए त्यसै समयबाट म ने.वि.संघमा आबद्ध भएँ र आजको दिनसम्म म निरन्तर रुपमा लागी रहेको छु ।
विद्यार्थी जीवन बाट राजनीतिक यात्र शुरुगर्नु भएको रैछ यता जिल्लामा र्चै कहिले देखि बाट आएर राजनीति गर्न थाल्नु भयो ?
यस्तो भयो जव म नेविसँघमा थिएँ नेपाली काँग्रेसको बार्षिक रुपमा वि.पि. कोईरालाको जन्म दिवस पारेर क देशब्यापीरुपमा बृक्षरोपण गर्दै आएको थियो म पनि त्यही कायक्रम लिएर २०४३ सालमा म लगायत अरु ५ जना साथी जिल्ला आयौ जिल्लामा आउँदा तत्कालिन प्रशासनले म लगाएत म सँग आएका अरु ५ जना साथीहरुलाई पनि एरेष्ट गरयो र अनुसन्धानकै क्रममा ३,४ दिनसम्म रामेछाप प्रहरी चौकीमा राखेर अरु साथीहरुलाई छाडीयो र म र ध्रुवहरी ढुगेंल लाई धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वर चलान गरियो र हामीलाई संघसँस्था नियन्त्रण नियमावलि ऐन अनुसार मुद्दा चलायो र छ महिना को जेल बसाई पछि बल्ल जनकपुर अञ्चल अदालतले हामीलाई धरौटीमा छाडने वा नीजले धरौटी तिर्न नसकेमा ३ बर्ष सम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने भन्ने फैसला गरयो । र हामी दुवैजना धरौटी मा छुटयौ यद्यपि मुद्दा भने चलिनै रहयो । अनि २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत सासन ब्यवस्थालाई पराजीत गरि बहुदल व्यवस्था आयो र बहुदल व्यवस्थाका पहिलो पधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भटटराईले सम्पूर्ण राजबन्दी मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा खारेज गरे सँगसँगै हाम्रो मुद्दापनि खारेज भयो । त्यसपछि २०४९ सालमा आम निर्वाचन हुने भयो र २०४८ सालदेखि पार्टीको प्रचार प्रसारमा खटिएँ र २०४९ सालको निर्वाचनमा स्वयं म पनि जिल्ला विकास समिती सदस्यमा निर्वाचित भएँ । त्यस समयदेदि विद्यार्थी राजनीति छाडी जील्लास्तरीय राजनीतिमा सक्रिय भएँ ।
विद्यार्थीकाल देखी नै राजनीति गर्नु भएको रहेछ यहाँका धेरै समकालिन साथीहरु कर्यौ केन्द्रमा पुग्नु भयो होला कति लाभ लिने ठाउँमा पनि पुग्नु भयो होला यहाँलाई कहिले काहीं राजनीतिमा लागेर पछाडी परेको जस्तो लाग्दैन ।
मानिस सवैभन्दा पहिला सन्तुष्ट हुनुपर्छ म यही स्थानीय राजनीतिमै सन्तुष्ट छु अवसरनै पाईहालेमा केन्द्र लगायत महत्वपूर्ण पदमा नजाने भन्ने कुरै हँदैन फेरी राजनीति भनेको पदको लागी भन्दा पनि जनताको लागि गर्ने हो अनि कुरा रहयो लाभको कुनै किसीमको लाभ लिन राजनीति गर्ने हैन यदी त्यसो हो भने त व्यापार व्यवसाय गरे भै हाल्यो नी । समकालिन को कुरागर्नु भयो हो मेरै धेरै समकालिनहरु सांसद,मन्त्रीहरु भएहोलान म त्यसमा खुशिनै छु ।
तपाईलाई लाग्दैन अहिलेको राजनीति भने को पैसाहुनेले मात्र गर्न सक्छ ?
तपाईले भन्नु भएको कुरा एकदम सत्यनजिक छ । पहिलाको समय र आजको समय फेरिएको छ । पहिलाको समयमा विचार हुनेले राजनीति गर्ने हो तर ऐलेको समय पैसा हुनेले राजनीति गर्ने हो । पहिला विचार लगन र राजनीति एक अर्काको परिपुरक थिए भने अहिले पैसा र राजनीतिक एक अर्काको परिपुरक भएका छन । नेताहरुमा ब्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको छ पार्टीभित्र गुटगत चरित्र सँस्थागत जतिकै भएको छ । नातावाद कृपावादले यो देश चलेको छ । वास्तवमा सोझा साझ कार्यकर्ता निमुखा जनतालाई त यो देशमा बाँच्नै गारो छ ।
भने पछि तपाईलाई राजनीति प्रति नै नैराश्यता भएको हो कि नेपाली काँग्रेस प्रति ?
त्यो तपाई आफै बुझ्नुस राजनीतिक पृष्ठभुमी भएका नेता कार्यकर्ता पाखा लाग्दै छन भने गैर राजनीतिक ब्यक्तिहरु भने ठुला नेताका काख लाग्दै छन । अनि कसरी हुन्छ त जनअपेक्षा अनुरुपका काम विकस ।
कतै नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा वत्तिबालेर खोज्नु पर्ने भएको कारण पनि यहि नै त होईन ?
यहाँले भन्नु भाको जस्तै बत्तिनै बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था चैं भएको छैन । अहिले हामी दोश्रो पार्टी हौं गएको निर्वाचनमा दई ठुला दल मिलेर लडेका हुनाले स्वभाविक रुपमा उहाँहरुको मत धेरै आएको हो पुरै देशै कम्युनिष्टमय भएको समयमा हामीले एकदम स्वभाविक र सम्मानजनक मत त ल्याएकै हौ नी ।अव हेर्नुसन फेरी पहिलो पार्टी हुने भनेको काँग्रेस नै हो काँग्रेस प्रतिो जनताको भरोसा जति थियो नी झन बढदैछ ।
तपाई भन्नु हुन्छ अव फेरी पहिलो पार्टी काँग्रेस नै हो तर काँग्रेसले तवि.पिको समाजवाद त्यागेर स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको छ अनि कसरी काँग्रेसलाई जनताले पत्याउने ?
यस कुरामा भने रतिभर पनि म सहमत छैन यदि काँग्रेसले वि.पि को समाजवाद त्यागेको भए यो काँग्रेस पार्टी नभएर अरुनै पार्टी भैहाल्थ्योनी काग्र्रेस आजसम्मपनि विपिले तय गरेको बाटोमा अविचलित भएर निरन्तर रुपमा लागिरहेको छ । अनि फेरी एमाले र माओवादी केन्द्रले जनता प्रति गरेको विश्वासघातले जनताको निराशा चरम विन्दुमा पुगेको छ । र आज पनि जनताको नेपाली काँग्रेस प्रतिको भरोसा त्यतिनै छ जत विगतमा थियो ।
अनि यहाँ तपाईको नगरमा चैं नेपालि काँग्रेसको सँगठन कस्तो रहेको छ ?
सँगठन राम्रो भएको भए त हामीले नगर प्रमुखनै जितीहाल्थियौंनी तर पनि हाम्रो संगठन निराशाजनक भने छैन त्यही भएर त केही वडामा हामीले जित हासील गरयौं । तर अहिले समयले कोल्टे फेर्दै छ अहिले सँगठन राम्रो हुँदै छ । र कसैको लोभ प्रलोभनमा परेर भत्किएको सँगठन पूर्नगठन हुँदैछ । अव हामी हाम्रो नगरमा पनि शसक्त रुपमा खडा हुन सक्ने अवस्थामा छौं ।
कतै फेरी पनि पहिलाको जस्तै हुने त हैन?
हैन त्यो त अव २ वर्ष पछिको निर्वाचनले नै बताई हाल्छनी हो एउटा कुरा के चैं सत्यहो भने नेपाली काँग्रेस भित्र घात अन्तर्घात यथावतै छ । यदि नेपाली काँग्रेस डराउनु पर्छ भने उ स्वयं आफै सँग डराउनुपर्छ र मुख्यत ः काँग्रेस आजको दिनमायो अवस्थामा पुग्नु पनि आफ्नै कारणले हो ।
तपाई निर्वाचित भएर आएपछि जनतालाई देखाउनु भएको सपना कतिको पुरा गर्नु भयो ?
जनतामा मैले भ्रम फैलाएर कुनै सपना देखाएको थिईन म भ्रमको राजनीति गर्ने ब्यक्ति हैन । म यथार्थवादी हँु त्यसैले त मेरा नगरवा वडावासी म प्रति विश्वस्त हुनुहन्छ । मैले जे वाचा गरेको थिए कति पुुरा भए कति क्रमश ः पुरा हुँदैछन ।
तपाईहरु प्रति जनअपेक्षा त धेरै थिए होलान नी हैन ?
यहाँ मत्रै हैन नेपालभरिनै तात्कालिन शस्त्र माओवादीको विद्रोह को शुरुवातीको पछि गाउँ वडा जनप्रतिनिध विहीन थियो । त्यसैले जनताले गुनासा पोख्ने कुनै ठाउँ थिएन । विकासको कुनै सुनिश्चितता थिएन जनता आफ्नो आवाज दवाएर बाँच्न बाध्य थिए । जव हामी निर्वाचित भयौं स्वाभाविक रुपमा जनअपेक्षा धेरै थिए फेरी जति खेर हामी निर्वाचित भयौ हामी पहिलो लोकतान्त्रीका गणतन्त्रको पहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको कारणले पनि नियम कानुन आफैले बनाउदै कार्यानन्वयन गर्दै जानुपर्ने थियो अलिकति अलमल त्यसमा पनि भयो । अनि फेरी भुकम्पले सम्पुर्ण नेपालको भुमीलाई नै थलथल बनाएको थियो । सवैका घर लडेका थिए कसैका चर्केका थिए । त्यसैले हामीले पहिलो कार्य जनताका वासका निम्ती गर्नु पर्ने भयो र जनताका घर पुनःनिर्माण गर्न का लागि ढुगां ,सिमेण्ट रड लगायत कच्चा पदार्थ लान भौगोलिक दृष्टिले हामीलाई सारै गारो थियो र आवास निर्माणमा सहज पार्न , आर्थिक घटाउन हामीले पहिला बाटो खोल्नु परयो हामीले प्रत्येक घरमा बाटो पुरयाएका छौं । विकासका केही काममा अगि बढदै थियौं विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको पहिलो चरणको कोरोना जस्तो माहामारीले हामीलाई पनि छोयो र फेरी अहिले दोश्रो चरणको कोरोन माहामारीले फेरी असर पार्दैछ ।
जनविकासको काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म आफैं त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन नगरको सिमीत श्रोत साधनबाट विकासका असिमित कामहरु गर्नुपर्ने छ जुन कुरो तत्कालै असम्भव पनि छ तर पनि क्रमश ः रुपमा कामहरु घटाउँदै लगिसकेका छौं । र अव ८ , १० बर्षमा मेरो वडा पूर्ण रुपमा विकसीत हुन्छ ?
भने पछि आगामी निर्वाचनमा फेरी उम्मेदवारी दिने मनशाय बनाउनु भएको छ कि क्या हो ?
हैन त्यो कदापी हैन फेरी उठने मेरो कुनै मनशाय छैन म त अरुले पनि चान्स पाउनु पर्छ भन्ने ब्यक्ति हुँ अव अरुनै कुनै नयाँ अनुहार आउनु पर्छ । जो ब्यक्ति समाजसँग भिजेको र राजनैतिक रित्रको होस भन्ने चाहन्छु ।
कतै तपाई को दृष्टि अव मेयरतिर त परेको हैन ?
त्यसो पनि हैन तर पार्टीको निर्णय भयो भने मेयर मात्रै हैन वडा सदस्य कै पनि उम्मेदवार बन्नु पर्ने हुन्छ । हामी निष्ठावान राजनीतिज्ञ पार्टी को निर्णयलाई सर्वोपरि मान्र्दछौं । तर के चै पक्कै हो भने मेयर हुँदा खेरी राम्रो नीति नियम बनाएर प्रभावकारी र जनमुखी काम गर्न भने चैं सकिने रहेछ । र मेरो अहिलेको सपना पनि त्यही हो भौगोलिक विकटताले पिरोलेको मेरो समाज परिर्वतन भएको हेर्न चाहन्छु । कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य मेरा दाजुभाई दिदी बहिनी र आमाबुबा को निम्ती सहजरुपमा जीवनयापन गर्ने बनाउन म मेरो अन्तिम सास रहुन्जेल सम्म पनि म सक्रिय रहने छु ।
हस यहाँले भने जस्तै यहाँको वडावासीको नगरवासीको भौगोलिक विकटताले कठिन बनाएको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउे सपना पुरा होस हामीलाई यहाँको महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
म र यस नगरको मेरो पार्टी भित्रको अवस्था अनि मेरो वडाको विषयमा केही प्रष्टायाउने मौका दिनुभएकोमा यहाँँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
काठमाडौँनेपाली समाचारफिचरमन्थली नगरपालिकाराजनिती